कांग्रेसको कथा, जनताको व्यथा – BP Bichar
Home›नेपाली कांग्रेस›कांग्रेसको कथा, जनताको व्यथा
कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाले कांग्रेसको नेतृत्व परिवर्तन गरेर कोइरालाहरूले लगाम समात्ने बताएका छन् । उनले सभापति शेरबहादुर देउवा वृद्धावस्थामा प्रवेश गरिसकेकाले आराम गर्नुपर्ने सुझाब पनि दिएका छन् ।
शशांकको यो भनाइले कांग्रेसका कति कार्यकर्तालाई आकर्षित गर्नेछ र जोसिलो बनाउनेछ ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । विश्लेषक विष्णु सापकोटाका अनुसार ‘देउवाको विकल्पमा शशांक आउनु भनेको कांग्रेसका लागि तातो कराईबाट उम्केर तातो जस्ताको छतमा हामफाल्नु हो ।’
यतिवेला कांग्रेस विचित्र संकटमा परेको छ । सभापति देउवाले यस्तो संकट आउने परिकल्पना गरेका थिएनन् होला । यस्तो संकट कांग्रेसका लागि नयाँ होइन । खासगरी १ पुस ०१७ अगाडि पनि कांग्रेस विभिन्न गुटमा विभाजित थियो । बिपी कोइराला सबैका नेता हुनुहुन्थ्यो । तर, उहाँविरुद्ध गणेशमान सिंह, सुवर्ण शमशेर, सूर्यप्रसाद उपाध्यायजस्ता कांग्रेसका हस्तीको खेल चलिरहन्थ्यो ।
यस्तो खेल सभापति बिपी कोइरालालाई दुःख र दबाब दिने उद्देश्यले भन्दा पनि पार्टीभित्र नेताहरूले आ–आफ्नो वर्चस्व बढाउन खेल्ने गर्थे । तत्कालीन समयमा सबै नेतालाई थाहा थियो, बिपीलाई चुनौती दिन सकिन्न । नेता त बिपी नै हुनुहुन्थ्यो । अहिले त्यो अवस्था छैन ।
बिपीपछिको कांग्रेसले आफ्नो संगठन र साखको पूरै रूपान्तरण गरिसकेको छ । अहिलेका नेताको तुलना उतिवेलाका नेतासँग गर्न मिल्दैन । अहिलेका नेताका लागि आफ्नो व्यक्तित्व निर्माणका लागि पार्टीको प्रयोग अपरिहार्य भएको छ । उनीहरूसँग न बौद्धिक क्षमता छ, न सांगठनिक कौशल ।
सुशील कोइरालापछि कांग्रेसमा आनुवंशिक नेतृत्वको एउटा चरण सकिएको छ । बिपी कोइरालाको नेतृत्वपछि लामो समयसम्म कृष्णप्रसाद भट्टराईले पहिले कार्यवाहक सभापतिका रूपमा र पछि निर्वाचित सभापतिका रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्नुभयो । सभापतिका रूपमा भट्टराईको अवकाश एउटा मूल्य पद्धतिको समाप्ति थियो ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सभापतिका रूपमा पार्टी सञ्चालन आफ्नो राजनीतिक आकांक्षा पूरा हुने हिसाबले गर्नुभयो । यतिवेला उहाँको कार्यशैलीको चर्चा गर्नु आवश्यक छैन । किनभने, त्यो जगजाहेर सत्य हो । मूल कुरा यति मात्रै हो कि गिरिजाप्रसादको शैली उहाँको उत्तराधिकारमा आउने सम्भावना भएका सबै नेताले पछ्याए । नयाँ नेताबीच गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पार्टी नेतृत्व गतिशीलताको उदाहरण बन्यो ।
पछिल्लो चुनावपछि कांग्रेस चाउरिएको छ । नयाँ संविधान लागू भइसकेपछिको चुनाव परिणाम यति निराशाजनक होला भन्ने कल्पना कसैले गरेका थिएनन् । तनहुँको पारम्परिक कांग्रेसी क्षेत्रमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको अपमानजनक पराजय, कोइराला परिवारका आशालाग्दा ‘जिनिस’ मोरङमा शेखर कोइरालाको नमिठो पराजय र धनुषामा विमलेन्द्र निधिको अनपेक्षित पराजय विगत चुनावका असहज लाग्ने चरित्र थिए ।
त्योभन्दा पनि संसदीय सिटको आधारमा कांग्रेसले आफ्नो वर्चस्व यसरी गुमायो कि सिकायत गर्ने ठाउँसम्म पनि रहेन । दुई एकताबद्ध कम्युनिस्ट पार्टीसँग संघीय चुनावमा कांग्रेसको पराजयलाई अस्वाभाविक नमान्दा पनि स्थानीय तह र प्रादेशिक चुनावमा भएको पराजय आश्चर्यजनक थियो । स्थानीय तह र प्रादेशिक तहमा कांग्रेसको वर्चस्व छरिएको देखियो । यो राम्रो संकेत थिएन । किनभने, योसँगै एउटा नयाँ र महत्पूर्ण प्रश्न जोडियो, ‘के कांग्रेसले आफ्नो आधारभूमि गुमाएकै हो त ?’
यद्यपि, एउटा राष्ट्रिय पार्टी कुनै एउटा चुनावमा हार्नेबित्तिकै उसको जनाधार सकिँदैन । तर, कांग्रेसका नेताले यसरी सोचेको देखिएन । चुनावमा पराजयका कारण खोजी र विश्लेषणमा भन्दा पनि नेताहरू पारस्परिक आरोप–प्रत्यारोपमा अल्झिए ।
सभापति अन्तर्घातीलाई कारबाही गर्ने र कांग्रेसका कर्णधारका रूपमा रहेका नेताहरू सभापतिलाई अपमानित गर्न लागे । यो अनौठो र आत्मघाती खेल अहिले पनि जारी नै छ । कांग्रेसको दुस्मन कांग्रेस नै भएको यो अनौठो अवस्थाले निर्गम पाएको छैन ।
कांग्रेसको दुरवस्थालाई खासगरी वामपन्थीले आफ्नो उपलब्धि ठाने । वामपन्थीसँगै राजाका समर्थक र विवेकशील साझाजस्ता कांग्रेसविरोधी साना पार्टी पनि कांग्रेसविरोधी समीकरणमा मिसिए । यो अस्वाभाविक थिएन । अस्वाभाविक के थियो भने कांग्रेसका नेताहरू समाजवादको वामपन्थी बाटो छाडेर हिन्दुत्वको अनुदार मार्गमा लागे ।
शशांकदेखि शेखरसम्म र खुमबहादुर खड्कादेखि शेरबहादुर देउवासम्मलाई यो नाराले मोहित गरेको थियो । भारतका हिन्दुत्ववादी पार्टी र नेताहरूको आशय र आग्रहअनुसार यो नारा तत्कालीन एमाले र माओवादी नेताहरूको पोल्टामा पनि हाल्न खोजिएको थियो ।
हिन्दूहरूको चाहना नेपाल हिन्दू राष्ट्रकै रूपमा रहोस् भन्ने थियो । कांग्रेस हिन्दुत्वको धङधङीबाट अहिले पनि मुक्त भइसकेको छैन । नेपाललाई आधुनिक समाजका रूपमा रूपान्तरण गर्ने बिपी कोइरालाका सुपुत्रले नै यो मिसन मन पराएका छन् ।
वामपन्थीले कांग्रेस गएको चुनावमा जनताबाट तिरस्कृत भएकाले यसको दिन सकिएको घोषणा गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार २००७ सालदेखि अहिलेसम्म कांग्रेसको गलत शासनले देशको विकास हुन नसकेको हो । वामपन्थीले कांग्रेसलाई अर्घेलो बनाउँदा बडो सुविधाजनक हिसाबले २०१७ देखि २०४६ सालसम्म चलेको राजाको प्रत्यक्ष शासनलाई बिर्सिएका छन् ।
राजाको शासनकालमा वामपन्थीको सत्तासँगको संघर्ष सहज थियो । उनीहरू निर्दलीय पञ्चायतका स्थानीय राजनीतिक एकाइ र लाभका संस्थामा काम गर्थे । ०३६ सालको जनमत संग्रहमा वामपन्थीले निर्दलीय व्यवस्थाका पक्षमा चुनाव बहिष्कार गरेको त जगजाहेर नै छ ।
यसपछि पनि उनीहरूले निर्दलीय सत्ताको स्वाद चाखिरहे । ०४६ को परिवर्तनपछि वामपन्थी एमाले पार्टीको हैसियतले सत्ता र शक्तिको अभिन्न अंगका रूपमा जोडियो । अहिले कांग्रसको विरोधमा उत्रिएका वामपन्थीले एमालेलाई जनताले ‘भाइ कांग्रेस’ भनेर चिन्ने गरेको सत्यलाई पनि बिर्सिनु हुँदैन ।
कांग्रेसको राजनीतिमा आगामी दिनहरू निकै कष्टकर र अप्ठ्यारो हुनेमा अब शंका नगरे हुन्छ । प्रमुख भनिने नेताहरू जसरी एकअर्कासँग जुध्दै छन्, त्यसले कसैको हित गर्दैन । महामन्त्री शशांक कोइरालालाई बिपीका कान्छो छोराका रूपमा सांसद बनाइराख्लान् ।
कांग्रेस सभापतिका रूपमा उनलाई स्थापित गर्न चाहनेहरू पनि कम शक्तिशाली छैनन् । शेरबहादुर देउवा र शशांकलाई सभापति र महामन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने कल्पनाशीलता देखाउनेहरू अहिले पनि सक्रिय छन् । उनीहरूले उनका कमजोरीको ढाकछोप गरेर उनलाई पार्टीको सर्वोच्च नेतृत्वमा पु¥याउन सक्छन् । तर, उनीबाट केही होला भन्नेमा धेरैको शंका छ ।
कांग्रेसका एकथरी कार्यकर्ता कांग्रेसलाई कोइरालाको बपौती मान्छन् भने अर्काथरी यो कुराको खण्डन गर्छन् । सत्य यति मात्र हो कांग्रेस एउटा राजनीतिक संगठन हो, जो धर्म, जाति, परिवार सबैबाट निरपेक्ष रहेको छ । कांग्रेसका नयाँ–पुराना र साना–ठूला सबै कार्यकर्ता यतिखेर चामत्कारिक नेतृत्वको खोजीमा छन् । उनीहरूमा व्यापक छटपटी छ ।
तर, कार्यकर्ताले खोजेको जस्तो चामत्कारिक नेतृत्व दिन सक्ने व्यक्तित्व दृश्य पटलमा छैन । हुन सक्छ, आगामी चुनावसम्म त्यो प्रकट होस् । त्यसो भयो भने पनि चमत्कारकै विषय हुनेछ । पार्टीका लागि सहज र असहज दुवै अवस्थामा योगदान गरेका व्यक्तित्वको अभाव छैन । अहिले पनि एकसेएक कार्यकर्ता सक्रिय छन् ।
चुनाव हारेका नेताहरू आफ्नो पराजयको कारण आफ्नै साथी रहेको बताउँछन् । आफ्नो अयोग्यताका कारण आफूँले चुनाव हारेको मान्न तयार छैनन् । यो नै कांग्रेसको रोग हो ।
तैपनि, कांग्रेसमा किन नेतृत्वको अभाव देखियो ? किन असल कांग्रेसीको खडेरी परेको देखियो ? किन कांग्रेस नेतृत्व निष्प्रभावी हुँदै गयो ? कांग्रेसबारे सोच्ने जोसुकैले यी प्रश्नको जवाफ खोज्नु समिचिन हुनेछ ।
सभापति शेरबहादुर देउवाको अहिले जसरी घेराबन्दी गरिएको छ, कांग्रेसका लागि त्यो नौलो होइन । कृष्णप्रसाद, गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइराला सबै घेराबन्दीमा परिसकेका हुन् । तर, सभापति देउवाविरुद्धको घेराबन्दी अलिकति पृथक् नै छ ।
बदलिँदो समयअनुसार कांग्रेसले आफूँलाई पुनर्जागृत गराउने हो भने सबभन्दा पहिले पार्टीमा मूल्य पद्धतिलाई जागृत गराउनुपर्छ । यो काम कसले गर्ने ? अहिले आपूmलाई कांग्रेसका असली हकदार बताउने कोही पनि मूल्य–मान्यताका पक्षमा देखिएको छैन ।
सबै सत्ता र शक्तिको घोडा चढ्न हतारिएका छन् । वामपन्थी दुईवटा पार्टी हुँदा पनि कांग्रेसले चुनाव नजितेको थिएन । तर, एउटा हुनेबित्तिकै कसरी हार व्यहो-यो ? यसको अध्ययन कसले गरेको छ ? अहिले चुनाव हारेका नेताहरू आफ्नो पराजयको कारण आफ्नै साथी रहेको बताउँछन् । आफ्नो अयोग्यताका कारण आपूmले चुनाव हारेको मान्न तयार छैनन् ।
यो नै कांग्रेसको रोग हो । यो रोगको सन्तुलित जवाफ जसले खोज्छ, त्यही नेता चामत्कारिक मानिनेछ। त्यसले कांग्रेसलाई अगाडि बढाउने काम गर्नेछ ।
breakingअन्तर्वार्ताविचारवी पी विचार
वीपीले किन भने ‘राजाको गर्धन मुनी मेरो गर्धन माथि ’—काँगे्रस नेता लेखनाथ न्यौपाने
breakingअन्तर्वार्तानेपाली कांग्रेससंस्था गतिबिधी
breakingनेपाली कांग्रेसवी पी साहित्य
कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक आज बस्दै, नेविसंघ तदर्थ समिति गठनबारे छलफल ।